के क्यानडाले टर्की, लुफ्तान्सा, अस्ट्रियन, कतार एयरवेज, एरोफ्लट र युक्रेन अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स प्रतिबन्ध लगाउनेछ?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » एयरलाइन्स » के क्यानडाले टर्की, लुफ्तान्सा, अस्ट्रियन, कतार एयरवेज, एरोफ्लट र युक्रेन अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स प्रतिबन्ध लगाउनेछ?
एयरलाइन्स • हवाई अड्डा • अस्ट्रिया ब्रेकिंग न्यूज • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • क्यानाडा ताजा खबर • अपराध • सम्पादकीय • जर्मनी ब्रेकिंग न्यूज • मानव अधिकार • ईरान ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • कतार ब्रेकि News न्युज • जिम्मेवार • रूस ताजा खबर • सुरक्षा • पर्यटन • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • टर्की ताजा खबर • युक्रेन ताजा खबर • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
क्यानेडाली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडाउ शनिबार भने कि उनको सरकारको ध्यान युक्रेनी हवाई जहाजको पीडितको लागि जवाफदेही र न्याय हो जुन इरानले यो दुर्घटनावश गोली हान्यो भन्दछ। यसको मतलब क्यानाडाले प्रतिबन्ध लगाउनेछ टर्की एयरलाइन्स, Lufthansa, अस्ट्रियाली, कतार, Aeroflot, र युक्रेन अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स क्यानाडामा ओभरफ्लाइ and र अवतरणबाट?
के मलेसियालाई एक एयरलाइन अपरेट गर्न अनुमति दिइनु पर्दछ? Tउसको प्रश्न २०१ly मा फ्लाइर्स राइटले सोधेको थियो मलेशियन एयरलाइन्सले जानाजानी पूर्वी युक्रेनमा युद्ध क्षेत्रको रूपमा उडान गरे पछि। MH 370 XNUMX० दुर्घटनाबाट गोली हानी भयो र बोर्डमा रहेका प्रत्येक यात्रीको मृत्यु भयो। मलेशिया एयरलाइन्सले तथापि सिकेका र इरानी एयर स्पेसको स्पष्ट रहिरहे।
अब युक्रेनको राष्ट्रिय वायुसेवा राम्रोसँग थाहा हुनुपर्थ्यो। चिन्ताजनक मनोवृत्तिको साथ, युक्रेनी क्यारियरले युद्ध क्षेत्रमा उडान गर्ने सचेत निर्णय गरे, जसको नाममा इरानले १ passengers176 यात्रु र चालक दललाई मार्यो।
चार दिन पछि त्यहाँ धेरै पीडितलाई माफी मागेन युक्रेन इन्टर्नेटिभायल एयरलाइन्सको व्यवस्थापनले, तर इरानबाट भुक्तानीको माग गर्दछ, यथोचित र उचित र तार्किक अनुरोध के हो। हिजो eTurboNews सुझाव दिए लुफ्तान्सा समूह पनि दोषी थियो १176 यात्रुको हत्यामा र आफ्नै सयौं ग्राहकहरूलाई जोखिममा पार्दै।
टर्की एयरलाइन्स, लुफ्तान्सा, अस्ट्रियन एयरलाइन्स, एरोफ्लट र कतार एयरवेजले त्यस डरलाग्दो दिनमा उदाहरणको रूपमा नेतृत्व नगरेकोमा पनि कुनै माफी मागिएको छैन। सम्भवतः यी मध्ये कुनै पनि एयरलाइन्सले कहिल्यै इरानको लागि उडान जारी गर्नमा कुनै गल्ती गरेको कुरा स्वीकार गर्न सक्ने छैन जब एएफए द्वारा वायु खाली स्थानमा सुरक्षित नभएको भेटियो र इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको बिचमा दुश्मनी आदानप्रदान भयो।
कम्तिमा इरान खडा भयो र दोषी स्वीकार्यो। यो दोषी याचिका अब संलग्न सबै पक्षहरू साझेदारी गर्नु आवश्यक छ।
बुधवार मर्नु नपर्ने १ 176 यात्रीहरूको परिवारलाई कसले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्छ? हो, क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडो र युक्रेनी राष्ट्रपति वोल्डोमाइर जेलेन्स्की इस्लामी गणतन्त्र ईरानको सरकारबाट न्यायको माग गर्नमा बिल्कुल सही छन्।
तर के श्री ट्रुडोले युक्रेन अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स, टर्की एयरलाइन्स, लुफ्तान्सा, अस्ट्रियन एयरलाइन्स, एरोफ्लट र कतार एयरवेजबाट पनि क्षतिपूर्ति माग गर्न मिल्दैन र?
क्यानाडाले त्यस्तो प्रतिक्रिया नदिने हो भने त्यस्ता क्यारियरहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने राम्रो कारण छैन? क्यानाडाले त्यस्तो विमान कम्पनीहरूलाई उनीहरूको देशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उचित कारण हुन सक्छ र क्षतिपूर्ति र प्रतिबद्धता नभएसम्म उनीहरूको अवतरण अधिकारलाई रोकिराखेको छ, त्यसैले यस्तो घटना कहिल्यै दोहोरिन सक्दैन।
क्यानेडाली प्रधानमन्त्रीले दुर्घटनाग्रस्त उडानमा सवार उनका citizens 68 नागरिक र उनीहरूका परिवारलाई .णी बनाएको छ। उसको पनि सबै क्यानाडालीहरुको जिम्मेवारी हो, त्यसैले क्यानडाबाट कसैले पनि त्यस्तो एयरलाइन्स उडानमा कुनै नोक्सान पुर्‍याउँनेछैन, जबसम्म कि त्यस्ता वाहकहरूले एफएए र यस्तै चेतावनीहरूको सम्मान गर्न बाध्यताबद्ध प्रतिबद्धता गर्दैन।
तथ्य यो छ कि वाणिज्यिक एयरलाइनहरू द्वन्द्व क्षेत्रहरूमा उडान गर्दछन् र त्यो कोडि meansको अर्थ यात्रुहरू उडानमा उडान गर्दै गरेको उडानको बारेमा थाहा नहुन सक्छ तिनीहरूले उडान बुक गर्दा उडान उडानलाई दायित्वमा खोलिन्छ जुन बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। धेरै व्यक्तिहरूले सोधिरहेका छन्: एक हवाईजहाजले युद्ध क्षेत्रमा उडान गरिरहेको के थियो?
"सुरक्षालाई गम्भीर जोखिम" को बारेमा एयरलाइन्सलाई चेताउनी दिए पनि एमएच 370 was० बिहान युक्रेनमा Three सय जहाज उडान गर्ने तय गरिएको थियो।
इरानमा, संयुक्त राज्यको संघीय उड्डयन प्राधिकरणले पनि यस्तै चेतावनी दिएको थियो र धेरै उड्डयन कम्पनीहरूले वेवास्ता गरे।
२०१ 2014 मा केएलएमले एक विज्ञप्तिमा भन्यो कि यसले "सम्बन्धित क्षेत्रमा उडानलाई बेवास्ता गर्दछ"। फ्लायर्सराइट्सले केएलएमलाई सोध्यो कि यो पुरानो हो वा नयाँ नीति हो। एयरलाइनले टिप्पणीको लागि हाम्रो कल फिर्ता गरेन।
यो कथा जारी छ ...।